भारतीय सै’न्य प्रमुखले चीनका विरुद्ध रातारात यस्तो आदेश दिए, विश्वभर खैलाबैला ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भारतीय सै’न्य प्रमुखले चीनका विरुद्ध रातारात यस्तो आदेश दिए, विश्वभर खैलाबैला !
admin August 28, 2020 August 28, 2020 समाचार	0
सिमा विवाधका कारण चीन र भारत दुवैदेशको सम्बन्धमा गिरावट आइरहेका बेला भारतीय सेनाका पुर्व प्रमुख एवं डिफेन्स स्टाफका प्रमुख जनरल विपीन रावतको एक टिप्पणीले समस्या सुल्झाउनुको साटो झन् तनाव श्रीजना गरेको छ। भारत र चीनविच पछिल्लो समय भइरहेको चरम्बद्ध वार्ताबाट कुनै निर्शकर्ष नआइरहेका बेला जनरल विपीन रावत समस्या वार्ताबाट समाधान नभए अन्तिम विकल्प भारतीय सेनासंग रहेको भन्दै यु’द्धको संकेत दिएका थिए ।
उनले हिन्दुस्तान टाईम्ससगँको कुराकानीमा लद्धाखमा चीनीया अति’क्रमण रोक्न सैन्य कार्बाहीको विकल्प बारे बिचार भईरहेको बताए । लद्धाखमा जुन १५ मा दुबै देशका सेनाबीच ह’तियार विहीन तर र’क्त’पातपूर्ण झ’डप पछि लगातार सैन्य तथा कुटनीतिक स्तरमा वार्ता जारी रहेका बेला रावतको यो भनाई आएको हो । उक्त झ’ड’पमा भारतीय सेनाका कर्णेल सहित २० सेना मा’रिएका थिए । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
उनले शान्तिपूर्ण रुपमा भारतले विवादको समाधान चाहेको बताउदै सेनाले सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको समेत दाबी गरे । लद्धाखबाट डेढ किलो मिटरका दरले दुबै देशका सेना फिर्ता गर्ने चीन भारतबीच सहमति भएको थियो । तर पनि ३५ सय किलोमिटर भन्दा बढी विवादीत सीमा क्षेत्रमा दुबै देशले सेना र ह’तिया’रको केन्द्रीकरण ती’व्र पारेका छन् ।
वास्तविक नि यन्त्र ण रेखामा पहिलाको जस्तो स्थिति बहाल नभएमा सैन्य कार्बाहीका लागि रक्षा सेवा हमेसा तयार रहेको रावतको भनाई छ । पछिल्लो समय भारतले चीनसगँ सभावित यु’द्धको तयारी स्वरुप फ्रान्सबाट खरीद गरेको राफेल लडाकु विमान, क्षे’प्यास्त्र , टैंकहरु बोर्डरमा तैनाथ गरेको छ । लद्धाखमा चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा यु’द्ध भएको थियो ।
जसमा भारत पराजीत भए पछि डोकलाम सहितका क्षेत्रमा सन् २०१७ मा विवाद भएको थियो भने जुन १५ मा लद्धाखमा र’क्त’पातपूर्ण झ’डप भएको थियो। पछिल्लो समय भारतले चीनसगँ सभावित यु’द्धको तयारी स्वरुप फ्रान्सबाट खरीद गरेको राफेल लडाकु विमान, क्षे’प्यास्त्र , टैंकहरु बोर्डरमा तैनाथ गरेको छ ।
लद्धाखमा जुन १५ मा दुबै देशका सेनाबीच ह’तियार विहीन तर र’क्त’पातपूर्ण झ’डप पछि लगातार सैन्य तथा कुटनीतिक स्तरमा वार्ता जारी रहेका बेला रावतको यो भनाई आएको हो । उक्त झ’ड’पमा भारतीय सेनाका कर्णेल सहित २० सेना मा’रिएका थिए । चीनले पनि स्टेल्थ फा’ईटर जे एफ २०, ड्रोन, टैंक र ४ हजार किलो मिटर सम्म मार हान्न सक्ने प’र’माणु ह’तियार सम्पन्न देगंफेंग २६ जस्ता घा’तक ह’तियार केन्द्रीत गरेको छ ।
*** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
कतारमा भएका श्रीमानलाई श्रीमतिले ‘आफ्नो बाटो लाग’ भनेपछि श्रीमान रुँदै लाइभमा (भिडियो हेर्नुस्)